Thwebula WinZip 3.3 – Android – Vessoft
WinZip – isofthiwe ukusebenza nge yokugcina ngetakhiwo letehlukene. WinZip kwenza ukubuka, ukwakha kanye ukukhipha ezinqolobaneni. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukuvula ngekhodi ZIP amafayela noma ukudala kubo for uphephile isitoreji idatha. WinZip isekela ikhophi okuqukethwe unpacked ebhodini lokunamathisela for ukuthanda okusheshayo imeyili noma izicelo ehlukahlukene. Futhi isofthiwe iqukethe esakhelwe imenenja yefayela upheqa noma evulekile amafayela PDF, izithombe, APK kanye namaphepha Microsoft Office. WinZip ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Usekela yokugcina ngetakhiwo letehlukene
Kusebenta amafayela zombhalo
Kuvulwa amafayela nemibhalo nezinhlobo ezahlukene
Amazwana on WinZip:
WinZip Ahlobene software:
Amafayela zlib Ifayela archiver enamandla ngekusitwa iningi archive takhiwo. Isofthiwe ine a amathuluzi anhlobonhlobo kanye nezici ukuqinisekisa umsebenzi elikhiqizayo archives.
Amamephu Isofthiwe ubonisa ebusweni iplanethi ngokusekelwa 3D ubuchwepheshe. Isicelo ubonisa namathafa okuningiliziwe kanye kwenza ukuhlela indlela lekuhanjwa ngayo nekutfola ukubuka ulwazi mayelana nezindawo ezehlukene evelele.
English, Українська, Français, Español... Remote Mouse 2801
Ukungena kokukude Hambayo Isofthiwe for elawulwa kude computer esebenzisa smartphone. Isofthiwe uyakwazi belingisa ngokugcwele imisebenzi igundane kanye ikhibhodi.
English, Français, Español, Deutsch... Outlook 1.3.17
E-mail Ithuluzi elula for the management imeyili. Isofthiwe bahlunga ngokuzenzakalelayo imeyili by ukubaluleka futhi likuvumela ukususa ngokushesha noma imilayezo archive.
English, Українська, Français, Deutsch... All-In-One Toolbox 5.3.5
English, Українська, Français, Español... Hotspot Shield 4.7.4
Internet Ukubethelwa Ithuluzi siqinisekisa ukuthi ubumfihlo in the internet. Isofthiwe ikuvumela ukuba ufihle IP-ikheli umsebenzisi kanye bamukele ukufinyelela amasayithi avinjiwe.
English, Français, Español, Deutsch... Mobogenie 3.1.18.1
English, Français, Español, Português... WhatsApp Messenger 2.16.337
-Internet Isiphequluli Fast ukuhlala ukhululekile internet. Isofthiwe ulungisa othomathikhi ubukhulu oyifunayo nesakhiwo umbhalo ekhasini lewebhu for the screen idivayisi.
Testing Isofthiwe enamandla ukuhlola ukusebenza kudivayisi. Isofthiwe ubonisa ulwazi mayelana amakhono kudivayisi futhi kwenza ukuba uqhathanise imiphumela lokuma namanye amadivaysi.